Ọrịa nke ụmụ akwụkwọ ùgwù
Ụfọdụ n'ime ha anọwo na-amụ ihe na ise kemgbe ha bụ nwata, ma ha enwetaghị ntakịrị ihe na ndụ ha. Igwe ndị ọzọ si na mbara igwe adịghị ejide, ma tolite - gaa na ndị ndú. Gini mere nmalite di omimi n'oge uto adighi eme ka oganihu n'agadi okenye?
Onye na-eche nche maka atụmanya Krismas
Achọkarị ime ihe niile dị ndụ na-abụkarị mgbe ọ bụ nwata. Nke a bụ otu n'ime ihe ngosi nke na-eto eto. Nwa nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ maara ihe na-etolite, onye ọ bụla na-eto ya, na-enwe mmasị na ya, ma jiri nwayọọ nwayọọ malite ịmasị onwe ya. Ọ chọrọ ime ihe niile karịa onye ọ bụla - ma ọ bụ ma ọlị.
Ya mere mmadụ na-aghọ onye mkpọrọ nke atụmanya ndị ọzọ. Onye ọ bụla na-atụ anya inweta ihe ịga nke ọma n'aka ya, ọ na-agbalịkwa ya kachasị mma, ọ gaghị enwe ike imeri ya.
Ma ná ndụ, e nwere ọdịda. Ha adịghị mma, ma ọ bụghị ihe ngọpụ ịdaba na ịda mbà n'obi, imebi. Otú ọ dị, nke a nwere ike ime na ndị nwere ọrịa nke ụmụ akwụkwọ ùgwù bụ ndị na-enweghị ahụmahụ maka ọnwụ, ọnwụ na mmeri.
Ụdị nwatakịrị dị otú ahụ na-eto eto n'oge ọ toro eto na-akpachara anya ma ghara izere ibu ibu onye ndu: ọ na-enwe mmasị ịbụ onye enyemaka nye onye ndu, ọkachamara, onye nyocha. O nweghị ike ịme mkpebi na ọnọdụ ụkọ na ịba ụba nke ozi ma ọ bụ ntụgharị uche: nwa akwụkwọ a ma ama ga-ebu ụzọ nyochaa ihe niile, chee echiche site na ...
Ụmụaka na-eto eto enweghị ike ịgabiga ókè nke ike ya, n'ihi na egwu na-atụ ya iji dozie nsogbu ahụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Ya, dị ka tram, na-aga n'okporo ụzọ a pịrị apị ma ghara ịgbanwere onwe ya n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
OTU NDỊ OTU EBE EBE
Ihe ọzọ bụ mmadụ atọ ahụ: ọ maara site na nwata ihe ọjọọ dị. Ee, ọtụtụ mgbe ọ na - enweghị ike idozi nsogbu, ma ọ mụtara ịpụ apụ, jiri obere oge belata ọnọdụ ya, ịnagide mmechuihu ma nwee mmeri. Nke a mere ka ọ gbanwee ma nwee mmetụta uche.
Troychnik, n'amaghi ogige ahụ, ji obi ike tinye aka na mmiri ahụ, atụghị egwu ịga ebe ọ na-adịghị onye ọ bụla ọzọ, na-adịghị anwa anwa ịgabiga ókè nke aka ya, n'ihi na ọ naghị eche na ọtụtụ amaghị ya. Onye na - enwe ụdị ọrịa nwoke na - arụpụta ihe ga - esi na ya pụta, na - amaghị otú e si edozi nsogbu ahụ, ọ bụghị mkpebi ya.
Dị ka akụkọ akụkọ Ivanushka, onye bụbu agadi nwoke ji obi ike na-awụnye aka n'ime okpukpu nri - ma na-enweta nkwanye, nwa akwụkwọ na-asọpụrụ anaghị ejikarị egwu - ma ọ dịghị aṅụ champeenu.
Ụmụaka na-asọpụrụ na-atụ egwu ịbanye n'ọrụ ọhụrụ, n'ihi na mgbe ahụ, ọ ga-adị mkpa ma ọ dịkarịa ala nwa oge iji rụọ ọrụ onye na-amu amu, nke a adịghịkwa echere ya. Troitschniku ​​anaghị atụ egwu ka ọ dị ọcha, ọ naghị eche ihe ha chere banyere ya; ọ bụ onye nwere onwe ya.
Ndị a bụ àgwà atọ nwere ike ime ka mmadụ bụrụ nwoke na-enwe ọganihu: nnwere onwe onwe ya pụọ ​​n'echiche nke ndị ọzọ, ime mgbanwe na ọnụnọ ihe mgbaru ọsọ.
Ihe atụ nke obodo MUNHAHAUSEN
Nwa akwukwo kwesiri ka o na-agbanwe site na tram nke na-agagharia n'okporo uzo, n'ime uzo di ike nke na-achoghi aka na uzo obula? Ma eleghị anya, ọ bụ ezie na ọ gaghị adị mfe. Mana o nwere onye inyeaka - isi ya na-egbukepụ egbukepụ, amamihe ya.
• Ihe mbụ nwa akwụkwọ nwere ike ime bụ iji kewaa ma lelee onwe ya si n'èzí, iji gwa onwe ya okwu. Iji mee nke a, ọ bara ezigbo uru idebe akwụkwọ edetu. Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ ochie gị, na-adọghachi azụ, gbalịa ịghọta ihe ị bụ na ihe ịchọrọ ịghọ. Na akparamagwa, a na-akpọ mkpochapu onwe ya dị ka mgbanwe.
• Nhọrọ oge ochie bụ ile foto ndị ochie. Nke ahụ bụ ihe m bụ otu, ọ bụghị ka nke a. Kedu ihe m chọrọ, gịnị ka m rọrọ? Gịnị mere na ọ baghị m uru?
• Ụzọ nke abụọ bụ mkparịta ụka na onye gbasara onwe gị. Ọ ka mma ma ọ bụrụ na onye na-ahụ maka ndị ọrụ ahụ bụ ọkachamara n'akparamàgwà mmadụ.
Gbalịa icheta ihe mere ị na-enweghị ike ịghọta onwe gị.
• Ụzọ nke atọ bụ ịjụ onwe gị ajụjụ ndị bụ isi: ihe ọjọọ na ndụ m; gịnị na-egbochi m ime ihe m na-emebeghị? N'ikpeazụ, gịnị ka m ga - achọ ime n'onwe m na ndụ?
N'ezie, ọ bụrụ na ịmalite iche echiche banyere ihe ndị dị otú ahụ, enwere ọtụtụ ezi ihe mere ị ga-eji ghara ịdọpụ onwe gị n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ma ọ bụrụ na ị ghọtara ihe egwu nke ọdịda nwere ike iduga, mgbe ahụ, ike ga-enwe ihe ịga nke ọma.
Mmekọahụ na nọmba ekwentị
Mwekorita ndụ na echiche nke ụmụ nwoke
Mmekọahụ na usoro sayensị
Atụmatụ maka ọkà n'akparamàgwà mmadụ: otu esi achọta nwoke gị nwanyị
Gini mere mmadu ji wepu onwe ya ma kwusi ikwenye ndi mmadu obi?
Otu esi enyere nwanyi aka izere ime ihe ike site n'aka di ya
Nwanyi uwe nke tiger agba
Ịlụ onye ị hụrụ n'anya
Ịkpọ aka site na aka aka na ngụsị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara ma ọ bụ 4 klas
Nhọrọ nke ekele na ọchịchọ kacha mma maka ncheta nke agbamakwụkwọ
Lavash na suluguni na cilantro
Ighachi azụ ịhịa aka n'ahụ maka ụmụ nwoke bụ ọgwụgwọ kasị mma maka ike ọgwụgwụ
Otu esi achichapu oke ibu mgbe amuchara nwa
Ihe ịrịba ama na njirimara nke shuga
Chicken na Spanish
Corset - otu ihe dị mkpa nke uwe ejiji na 2014
Lorsuanian oyi borsch
Nkọwa na-ekwu maka otu Krismas maka ụzọ Krismas bụ ụzọ kacha mma ị ga-esi mara ọdịnihu
10 mmekọahụ ndụmọdụ niile oge
Star Ụmụaka Na-eto
Otu esi akpọ nwa nwoke ka o nwee ihe ịga nke ọma ma nwee obi ụtọ